Ini handiite fungidziro dzakawanda kwazvo kana zvasvika kune ramangwana rehunyanzvi, asi kana ini ndikaona tekinoroji ichienda mberi ini ndinowanzoona mukana unoshamisa wevashambadzi. Iko kushanduka kwehungwaru hwekunyepedzera pamwe chete nezvisingaenzaniswi zviwanikwa zvebandwidth, simba rekugadzirisa, ndangariro uye nzvimbo zviri kuzoisa chatbots kumberi pakati pevatengesi.
Chii chinonzi Chatbot?
Chat bots ndeyezvirongwa zvemakomputa zvinoteedzera kutaurirana nevanhu vachishandisa njere dzekunyepedzera. Ivo vanokwanisa kushandura iyo nzira yaunofambidzana nayo neinternet kubva kune akateedzana eako-ekuzvitangira iwe mabasa kune quasi-hurukuro Julia Carrie Wong, Mutariri
Chatbots haisi nyowani, ivo vanga vakatovepo kwenguva yakareba sekunge chat yanga iriko. Izvo zvachinja kugona kwavo kunyatsobata hurukuro nemunhu. Muchokwadi, iyo tekinoroji yakafambira mberi zvekuti pane mukana iwe unogona kunge watove nehurukuro ne chatbot uye usati watombozviziva.
Nei Vatengesi Vachishandisa Chatbots
Pane nzira mbiri dzekudyidzana kuburikidza newebhu. Kukurukurirana kwepasipo kunoisiya iyo kumushanyi kuti atange kuonana nechako. Kupindirana kwekudyidzana kunotanga kusangana nemushanyi. Kana mucherechedzo ukatanga kusangana nemushanyi; semuenzaniso, kubvunza mushanyi kana vachida rubatsiro, ruzhinji rwevashanyi rwuchapindura. Kana iwe uchikwanisa kuita uye kubatsira iye mushanyi, iwe unogona kuzadzikisa akawanda zvibodzwa:
Mhiko Yokushanyira - Kambani yako ine zviwanikwa zvekubvunza mushanyi wese kuti ungavabatsira sei? Ini handizive nezvekambani inoita… asi chatbot inogona kukwira uye kupindura kune vakawanda vashanyi pazvinenge zvichidikanwa, pazvinenge zvichidikanwa.
Saiti Mhinduro - Kuunganidza yakakosha data nezve peji rako kubva kune wako mushanyi kunogona kukubatsira iwe kuvandudza saiti yako. Kana munhu wese ari kumhara pane peji yechigadzirwa asi akavhiringidzika nezve mutengo, rako rekushambadzira timu rinogona kukwidziridza iro peji neromutengo ruzivo kuti uvandudze shanduko.
Tungamira Unhu - Yakakosha huwandu hwevashanyi inogona kunge isingakwanise kushanda newe. Vanogona kunge vasina bhajeti. Vanogona kunge vasina iyo nguva yenguva. Vanogona kunge vasina zvimwe zviwanikwa zvinodiwa. Iyo chatbot inogona kubatsira kuona kuti ndeapi ma lead anokodzera uye ovaendesa kune ako ekutengesa timu kana kune iko kutendeuka.
Tungamira Kuchengeta - Kuunganidza ruzivo nezve yako tarisiro kunogona kukubatsira iwe kuzviita uye kuita navo parwendo rwevatengi kana pavanodzoka kunzvimbo.
Guidance - mushanyi amhara pane peji asi haakwanise kuwana zviwanikwa zvavari kutsvaga. Yako chatbot inovabvunza, iyo tarisiro inopindura, uye iyo chatbot inovapa iwo neyechigadzirwa peji, whitepaper, blog blog, pikicha kana kunyangwe vhidhiyo inogona kuvabatsira kuvasundira parwendo rwavo.
Negotiation - Vatengesi vanotoziva mashandisirwo ekutaurisa uye kudzokorora basa kana mushanyi asiya yako saiti. Ko kana iwe uchigona kutaurirana vasati vaenda? Zvichida mitengo yacho yakati rebei kuti iwe ugone kupa chirongwa chekubhadhara.
Fungidzira uine timu isingagumi yevakwazisa yekuita nevashanyi vako uye kubatsira kuvatungamira kuenda kune kutenga ... hazvingave zviroto kuzadzikiswa here? Huye, ndizvo izvo huchenjeri hwekugadzira uye chatbots ichave yako yekutengesa timu.
Infographic kubva Futurism.
Tags: aichakagadzirwa njereBotbotschat botchatbotchatbot nhoroondorwendo rwevatengikutungamirirwanhoroondo ye chatbotskutungamirira kutarisirakutungamira chinzvimbosaiti mhinduromushanyi kubatikanachiichii chatbot
Aug 23, 2016 na2: 51 PM
Chaizvoizvo mune ino chinyorwa uye infographic, asi ini ndinovimba tinotarisira kuti hatifunge nezve chatbots sedanho riri pachena reshanduko kune ese mabhoti!
Isu tanga tichinetseka nezve bots uye kuti vanofanirwa kubatsira sei kwe6+ makore. Maonero edu? Chaizvoizvo shanduko bots ichave iri nani zvakanyanya kupfuura aya ehurukuro bots - uye isu zvimwe ticharega kutaura nezve idzi mhando dze chat bots semabhoti zvachose.
Kufananidza - mabhoti aya akafanana neWebhu 1.0. Ivo vanoita basa, asi harinzwe zvemagariro - zvinoita sekunge otomatiki izwi masystem anotsiva chaihwo hupenyu hwevatengi rutsigiro.
Pamwe chete nevashandisi ve software yedu, UBot Studio, iyo inobvumira chero munhu kuvaka bots, isu tanga tichinetseka chii bots inobatsira chaizvo, kwenguva refu.
Isu takaisa pamwechete saiti yeruzivo iyo ine yakawanda yakawanda ruzivo rwekuvaka-bhodhi, kusanganisira zvimwe zvishoma kubva-pamadziro kufungidzira. Tarisa uone http://www.botsoftware.org. Izvo ndezve bots mune zvakawandisa, kwete chete chat bots, asi zvinofanirwa kubatsira kune chero munhu anoda kudzidza zvakawanda!
Ndatenda nechinyorwa chako!